Nagarik News - मध्यरातमा 'गुलाब ग्याङ'
रातमा इटहरीबाट धरानतर्फ जाने सुनसान सडकमा केही युवती हिँडिरहेका थिए। नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना इटहरीका सैनिक जवानहरू प्रदीप तामाङ, परमेश्वर राजवंशी र चन्द्रबहादुर तामाङले ती युवतीलाई 'कता हो बहिनी' भन्दै जिस्क्याए। उनीहरूले उत्तर दिए, 'धरानतिर'। सैनिक जवानहरू झन् जोसिँदै भन्न थाले, 'यति राति हिँडेर पुगिन्छ त, हिँड मोटरसाइकलमा।' अर्का युवाले थपे, 'नत्र कोठातिर जाउँ न त।'
त्यतिबेलासम्म वीरगञ्जका युवाहरू राजन उपाध्याय र मोहम्मद हुसेन पनि सैनिक जवानहरूसँग मिसिएर युवतीहरूलाई 'कोठातिर जाऊँ' भन्न थालेका थिए। त्यति नै बेला प्रहरीको गाडी आएर पाँचै युवालाई कर्‍यापकुरुप पारेर प्रहरी कार्यालय पुर्‍यायो। त्यसपछि मात्र ती सैनिक जवान र दुई युवाले थाहा पाए– उनीहरू सामान्य युवती होइन रहेछन्। उनीहरू त 'गुलाब ग्याङ'का सदस्य रहेछन्।
इलाका प्रहरी कार्यालय, इटहरीले महिला प्रहरी जवानहरू उर्मिला प्रधान, विष्णुमाया दाहाल, सीता फुँयाल, जमुना कन्दङ्वा, यशोदा कार्की, विष्णु धमला र मञ्जु राउतको टोलीलाई 'गुलाब ग्याङ'का रूपमा रात्रिकालीन गस्तीमा छाड्ने गरेको छ। सामान्य युवतीको जस्तो पहिरनमा राति सडकतिर हिँड्ने उनीहरूलाई जिस्क्याउने र दुर्व्यवहार गर्न खोज्ने युवाहरू फन्दामा पर्ने गरेका छन्। पिस्टोल र सञ्चार सेट लुकाएर बोक्ने 'गुलाब ग्याङ'ले दुर्व्यवहार गर्ने युवालाई तुरुन्त पक्राउ गरेर कार्यालयमा बुझाउँछ। युवाहरूको अलि ठूलै समूह भए तैनाथ रहेका ब्याकफोर्स बोलाउँछ। केही समयअघि सुरु भएको महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको अभियान 'गुलाब ग्याङ'को अहिले पूर्वमा खूब चर्चा छ।
भारतको उत्तर प्रदेश बुन्देल खण्डमा महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा र सामाजिक समस्याविरुद्ध लड्ने गुलाबी सारी लगाएका महिलाहरूको समूह 'गुलाबी ग्याङ' सक्रिय छ। त्यसैमा आधारित हिन्दी फिल्म 'गुलाब ग्याङ' विवादित र चर्चित बन्यो। भारतको त्यही गुलाबी ग्याङबाट प्रभावित सुनसरीको इटहरीमा महिला प्रहरीहरूले सञ्चालन गरेको 'गुलाब ग्याङ' अहिले प्रभावकारी ढंगले काम गरिरहेको छ।
पूर्वको व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै आएको इटहरीमा पछिल्लो समय लैंगिक हिंसा र आपराधिक गतिविधि बढेको बेला प्रहरीले ल्याएको गुलाबी ग्याङ अभियानले प्रशंसा पाएको छ। इटहरीमा हालै आएका डीएसपी विनोद शर्माले इटहरीलाई शान्त र सुन्दर बनाउन इलाका प्रहरी कार्यालयको गेटमै सातबुँदे लक्ष्यसहितको बोर्ड राखेका छन्। बोर्डमा उल्लेख भएअनुसार इटहरी प्रहरीका लक्ष्य हुन्ः भ्रष्टाचाररहित प्रहरी कार्यालय, वेश्यावृत्तिरहित नगर, गुण्डागर्दीलाई निर्मूल गर्ने, कार्यालयको सेवा दश मिनेटमा उपलब्ध, प्रमाणमुखी अनुसन्धान र सुरक्षामा नागरिक सहभागिता, घटना स्थलमा पाँच मिनेटभित्रमा प्रहरी र उजुरी दर्ता दुई मिनेटमा, उजुरीउपर कारबाही तीन मिनेटभित्र।
'सभ्य प्रहरी, सुरक्षित इटहरी' नारासहित शर्माले सुरु गरेको अभियानको पहिलो कारबाही प्रहरीबाटै सुरु भएको थियो। पत्रकार डेकेन्द्र थापाका हत्या अभियुक्तलाई मुद्दा चलाएर चर्चामा आएका शर्माले एक महिनाअघि इटहरी आउनेबित्तिकै मातहतका प्रहरीलाई सात बुँदा पालना गर्ने कसम खुवाएका थिए। त्यसको १० दिनमै एक होटल सञ्चालकसँग १० हजार रुपैयाँ घुस खाएको आरोपमा प्रहरी जवान पदम विक र साइकल चोर छुटाउन दुई हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा सई लब केसीलाई उनले निलम्बन गरेर अभियान थालेका थिए। इटहरीमा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेका यौनधन्दा र गुन्डागर्दी अहिले उनको प्राथमिकतामा छन्। उनले इटहरी र तरहराका छजना यौनधन्दा सञ्चालन गर्ने होटलवालालाई पक्राउ गरी कारबाही गरिरहेका छन् भने गुन्डागर्दी मच्चाउनेको लिस्ट बनाएर खोजीमा छन्। उनले पुराना अभियुक्तलाई पक्राउ र खोजी गर्ने कामलाई पनि उत्तिकै तीव्र्रता दिएका छन्। इटहरीमा जथाभावी खुलेका क्याबिन रेस्टुरेन्ट, त्यहाँ हुने यौन गतिविधि र नेपाली सेनाको पृतना तथा सशस्त्र प्रहरीको बाहिनीका कारण सामान्य युवतीलाई समेत खुलेर हिँड्न अप्ठ्यारो छ। प्रहरीले पछिल्लो समय चलाएको 'गुलाब ग्याङ' अभियानले महिलाविरुद्ध हिंसा न्यूनीकरण हुने आशा धेरैको छ। डीएसपी शर्मा चाहिँ सबै सुरक्षाको हिसाबले इटहरी शान्त बनाउन लागिपरेको बताउँछन्। भन्छन्, 'सबैतिरबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ। इटहरीको खस्किँदो सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर अभियान थालेपछि यहाँका महिला प्रहरी आफैँले 'गुलाब ग्याङ'को अवधारणा ल्याएका हुन्। मध्यरातमा एउटी महिला बिनाडर सडकमा हिँड्नसक्ने अवस्था सिर्जना नभएसम्म यो अभियान चल्छ।'
वनको बाघले खाओस्/नखाओस्, मनको बाघले खाइरहेको हुन्छ मान्छेलाई। विपत्ति बेहोरेको मान्छे डराउनु स्वाभाविक हो तर जब भयले चौबीसै घण्टा छोपिरहन्छ, व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्य गडबड हुन सक्छ। शक्तिशाली भुइँचालोले धेरैका मनमा...
लिभरपुललाई गिज्यायो बसेलले
स्विस फुटबल क्लब एफसी बसेल च्याम्पिन्यस लिगको प्री–क्वार्टर फाइनलबाट अघि बढ्नसकेको छैन। दुई वर्षअघि प्री–क्वार्टर फाइनलबाट बाहिरिएको बसेल यो पटक पनि प्री–क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ।
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको दैनिकी अचेल फेरिएको छ। उनको आफ्नो 'सेड्युल छैन', नयाँ शक्ति नेपालको 'सेड्युल'मा जहाँ पुग्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। उनको लवाइ पनि फेरिएको छ। वानपिस र हाई हिलमा सजिएर...
अझै कति लुटिने हो?
मलेसिया जान कामदारले ८० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्छ। तर, म्यानपावर कम्पनीले १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म उठाइरहेका छन्। खाडी मुलुक जान सरकारले ७० हजार रुपैयाँ लागत तोकेको छ, तर कामदार...
डा. जगमान गुरुङ संस्कृतिविद् हुन्। 'गण्डकी क्षेत्रका गुरुङहरूमा प्रचलित चिनियाँ–तिब्बती ज्योतिषशास्त्र' विषयमा भारतको कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका उनका नेपाली संस्कृति र इतिहासबारे छवटा किताब प्रकाशित छन्। डा. गुरुङको पठन र...